किन धरै डराउछन् अध्यारोमा मानिस ? यस्तो छ कारण … - Birgunj Sanjalकिन धरै डराउछन् अध्यारोमा मानिस ? यस्तो छ कारण … - Birgunj Sanjalकिन धरै डराउछन् अध्यारोमा मानिस ? यस्तो छ कारण … - Birgunj Sanjal
किन धरै डराउछन् अध्यारोमा मानिस ? यस्तो छ कारण …
२५ भाद्र २०७६, बुधबार २२:४३
एजेन्सी : हामीलाई अध्यारोमा डर लाग्नु सामान्य हो । तर, धेरै डराउने मानिसलाई मानसिक रोगले सताउन सक्छ । जसलाई मनोविज्ञानमा निक्टोफोबिया भनिन्छ । यस रोग लागेपछि मानिसहरु अध्यारोमा विभिन्न प्रकारका आकृतिहरु देख्ने गर्छन वा कोही भएको आभाष गर्छन ।
डर डर लाग्नुको यो पक्रिया तपाई ठण्डा दिमागले सोच्नु भयो भने आश्र्चय लाग्न सक्छ की मान्छेको दिमाग कति कम्पलेक्स हुन्छ । यो जानेर तपाईलाई मजा आउँछ किनकी तपाईलाई पनि काँही न काँही डर त लागेको होला रु बास्तवमा जब हामीलाई आफ्नो आसपास केही चिज वा कोई भएको आभाष हुन्छ ।
जसलाई हामी देख्न सक्दैनौ वा के हो भनेर जान्न सक्दैनौं तब, दिमागमा थेलेमस नामको हिस्सा डरको संकेत त्यस हिस्सालाई पठाउने गर्छ जाँहा हाम्रो दिमागमा विचित्र प्रकारका विचार उत्पन्न हुन्छ । त्यसबेला दिमाग यस चीज वा आवाजको चित्र बनाउँन पाउँदैन । त्यसपछि थेलेमसले दिमागको दोस्रो हिस्सामा यो संकेत पुर्याउँछ ।